Iindaba -Ingxoxo ngophuhliso oluphezulu kumgangatho ophakathi wamayeza
Ixhaswe ngumbutho we China Chemical Industry Association kwaye yenziwa yi Zouping Mingxing Chemical Co, Ltd., isemina kuphuhliso olukumgangatho ophezulu lweshishini eliphakathi lamayeza ebibanjelwe eDezhou, kwiPhondo lase Shandong. Umxholo wenkomfa uthi "ukutshintshiselana kwemida, ukudityaniswa kunye nophuhliso". Ngaphezulu kweenkokeli ezingama-300, iingcali kunye nabameli bamashishini kwishishini leekhemikhali banegalelo kubulumko babo ekukhuthazeni umgangatho ophezulu wophuhliso lweshishini.
Usekela-mongameli we-China Chemical Industry Association ucebise ukuba umbutho kufuneka uhambisane nombono ophambili wokufuna inkqubela phambili kuzinzo, uthathe uhlengahlengiso kunye nezinto ezintsha njengamandla okuqhuba, ukulungelelanisa ukhuseleko lophuhliso, ukwakha ipateni entsha yophuhliso, kunye nokunceda ukudityaniswa kwemizi-mveliso kunye nokwandiswa kwamazwe aphesheya. .
Ngokwe-China Petroleum kunye ne-Chemical Industry Federation, kukho iindlela ezine eziphambili zophuhliso lwe-petrochemical industry kwixa elizayo. Okokuqala, ikhonkco lezamashishini kufuneka lizabalaze ukufezekisa "ikhonkco elizinzileyo", "ikhonkco elomeleleyo" kunye "nokudibanisa"; okwesibini, iimveliso kufuneka zahlulwe ukuze zisondele kwimarike yokugqibela; Okwesithathu, okuluhlaza, ukhuselo lokusingqongileyo kunye neekhemikhali zobomi ziindawo ezintsha zokukhula kwixesha elizayo; Okwesine, uphuhliso olunqamleze umda kunye neemveliso "zenkonzo yokudibanisa" kufuneka zidityaniswe.
U-Chen Boyang, umhlalutyi weqela lamandla neekhemikhali loKhuseleko lwe-CITIC, uthe emva kokuhlalutya ukusebenza kwemali kumashishini angama-358 kule minyaka ingama-30 idlulileyo, kwafunyaniswa ukuba umyinge weendleko zemali kwimali yokusebenza iyonke yeenkampani zekhemikhali zibonisa imeko yokuhla. Ukholelwa ekubeni uRhulumente uyayikhuthaza intengiso yenkunzi ukuba ikhokele uphuhliso lwamashishini, nelinika ithuba lembali yotshintsho kunye nokuphucula ishishini leetyuwa elingaphiliyo kunye namashishini.
I-Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. ngokubhekisele kwinto entsha yetekhnoloji njengomphefumlo wophuhliso, ikwindawo yokuqala kwintengiso yemichiza yelizwe kangangeminyaka eli-10 ilandelelana, kwaye yenze igalelo elibalaseleyo kuphuhliso nakwinkqubela phambili yeshishini leekhemikhali. Kwintlanganiso, usihlalo wenkampani wazise inkcubeko yayo yenkampani "yokutya, ubuchule, ukuthembeka noxanduva", kwaye wabeka phambili umxholo "wenguqulelo zangoko" ukwenza izibonelelo eziphezulu kubathengi